Updgrade ဗီဒီယို Graphic Card ရဲ
Updgrade ဗီဒီယို Graphic Card ရဲ 10 လအတွင်း2weeks ago #1477
ကျွန်မလက်ရှိကြောင့်အတန်အသင့် ($ 250- $ 350) စျေးနှုန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းယျမှငါ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အဆင့်မြှင့်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
device: Desktop ကို - BVSMMEP
Processor ကို: Intel က (R) Core ™ i7 4790 CPU ကို 3.60GHz 3.60 GHz အမြန်နှုန်း
installed မှတ်ဥာဏ် (RAM ကို): 16.0 GB အထိ
စနစ် Type: Processor ကိုအခြေပြု 64 x ကို 64-Bit Operating System ကို
ကလောင်နှင့် Touch ကို: အဘယ်သူမျှမကလောင်သို့မဟုတ် Touch ကိုရရှိနိုင်
Windows ကို Edition ကို: Windows ကို 10
ဂရပ်ဖစ်ကတ်: NVIDIA GeForce GT 705.0
ငါ NVIDIA ကတ်များထက်အခြားဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမစျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးပျံ့နှံ့ဖြစ်ဟန်ကိုငါသိ၏။
ငါအဓိကအား FXE ရေနွေးငွေ့ပျံသန်း (သို့သော်က MS FS 2020 ထွက်လည်းမရှိကိုသိ) နှင့်ကြိုးစားရန် DSL သို့ကြည့်မျှော်ပါ၏ ငါများသောအားဖြင့်တစ်ပါတ်ကိုနာရီအနည်းငယ်ပျံသန်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်၏။
ထိုငျသညျငါ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု (သို့မဟုတ်မရှိခြင်းတို့ကို) ၏အယူအဆတခု (ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်) ပေးသည်ဒီတော့ဥပဒေ၌ငါ၏သားတော်သည်ငါ၏အကဒ်ထုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရပါလိမ့်မယ်။
Updgrade ဗီဒီယို Graphic Card ရဲ 10 လအတွင်း2weeks ago #1478
Nividia 1080 (1080ti .... အရမ်းစျေးကြီးမဟုတ်)
Excellent ကကဒ်။ refurbished ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအတန်းအစား၌တည်၏။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် hankal။ အကြောင်းပြချက် - မှတ်စုကိုထည့်ပါ
Updgrade ဗီဒီယို Graphic Card ရဲ 10 လအတွင်း2weeks ago #1480
အဘယ်အရာကို I`m ကြောက်လန့်ထိုကဲ့သို့သော Vid Card ကိုထောက်ပံ့သင့်ရဲ့ Motherboard ကဖြစ်ပါတယ်။ ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ Dell က PC များနှင့်တူ don`t ။ ငါပျက်စီးမှုများရတဲ့ခဲ့ Vid Card များကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်2သို့မဟုတ်3နှင့်တိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါယခု မှစ. ငါ၏အတညျဆောကျ။
0.184 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်